Myanmar State Counsellor and Thai Prime Minister exchange congratulatory messages – Ministry of Foreign Affairs
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar and H.E General Prauyt Chan-O-Cha (Ret.), Prime Minister of the Kingdom of Thailand, exchanged congratulatory messages on the occasion of the 70th Anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Republic of the Union of Myanmar and the Kingdom of Thailand which falls on 24 August 2018.
The messages are as follows :-
Message from Her Excellency DawAung San SuuKyi,
to His Excellency General Prayut Chan-o-cha (Ret),
on the Occasion of the 70th Anniversary of the Diplomatic Relations between Myanmar and Thailand
On the auspicious occasion of the 70th Anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Republic of the Union of Myanmar and the Kingdom of Thailand, on behalf of the government and people of Myanmar and myself, I have the honour to extend to Your Excellency and, through you, to the government and people of the Kingdom of Thailand our warmest congratulations and best wishes for their continued progress and prosperity.
Myanmar and Thailand are not only close neighbours sharing of long border and cultural affinities, but also fellow members of the ASEAN family with common aspirations. Over the past 70 years, Myanmar and Thailand have enjoyed friendly relations based on good neighbourliness and the principles of peaceful coexistence and have cooperated in many areas which bring mutual benefit to our peoples.
Through the frequent exchange of high level visits and building of personal friendship between the leaders, the existing friendly relations between our two countries have further advanced toanatural strategic partnership over the years. Myanmar and Thailand are also working together within various sub-regional frameworks for the peace and prosperity of our region, and helping each other in times of need. I firmly believe that the bonds of friendship and trade and economic cooperation between our two countries will continue to flourish in the coming years.
I would like to take the opportunity of this auspicious occasion to convey my best wishes for your good health and happiness and for the continued progress and prosperity of the Kingdom of Thailand and its people.
Messages from His Excellency General Prayut Chan-O-Cha (Rtd.), Prime Minister of the Kingdom of Thailand to
Her Excellency DawAung San SuuKyi,
of the Diplomatic Relations between Thailand and Myanmar
At this year marks the auspicious occasion of the 70th Anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Kingdom of Thailand and the Republic of the Union of Myanmar, I have the honour to extend my warmest congratulations and best wishes to Your Excellency and, through you, to the people of Myanmar.
For the past seventy years, the unique relationship between Thailand and Myanmar has been defined by an overriding commitment to good neighbourliness, understanding and shared objectives, as well as the longstanding friendship between our peoples. This foundation of cooperation and goodwill towards each other has allowed our countries to overcome various challenges and move forward together as “Natural Strategic Partners,” with deep-rooted connections in all areas andafirm commitment to an even stronger partnership that will be beneficial for our peoples and indeed, the region.
To mark this milestone, I have further the honour to reassure Your Excellency of the Royal Thai Government’s commitment to working closely with the Government of the Republic of the Union of Myanmar to promote development, progress, and prosperity for our two countries, as well as for ASEAN and the region. Furthermore, I take this opportunity to express my sincere appreciation to the Government of the Republic of the Union of Myanmar and the people of Myanmar, for entrusting in and promotingamost cordial and constructive relationship with the Kingdom of Thailand.
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်တို့အကြား ဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွှာများ အပြန်အလှန် ပေးပို့
(၂၄-၈-၂၀၁၈ ရက်၊ နေပြည်တော်)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့အကြား သံတမန် ဆက်သွယ်မှု ထူထောင်သည့် နှစ်(၇၀) ပြည့် အခါသမယအား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရာယုဒ်ချန်အိုချာ (ငြိမ်း) တို့သည် ဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွှာများ အပြန်အလှန် ပေးပို့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အဆိုပါ ဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွှာများကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့အကြား သံတမန်ဆက်သွယ်မှု ထူထောင်သည့် နှစ်(၇၀)ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အခါသမယတွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံမှ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရာယုဒ် ချန်အိုချာထံသို့ ပေးပို့သည့် သဝဏ်လွှာ
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့အကြား သံတမန်ဆက်သွယ်မှု ထူထောင်သည့် နှစ်(၇၀)ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အခါသမယတွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် ပြည်သူများ ကိုယ်စားလည်းကောင်း၊ မိမိအနေဖြင့်လည်းကောင်း အဆွေတော်နှင့် အဆွေတော်မှ တစ်ဆင့် ထိုင်းအစိုးရနှင့် ပြည်သူများအား လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါကြောင်းနှင့် ပြည်သူအပေါင်း ဆက်လက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် သာယာဝပြောစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းများ ပို့သအပ်ကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့သည် နယ်နိမိတ်ချင်း ရှည်လျားစွာ ထိစပ်၍ ယဉ်ကျေးမှုချင်း တူညီသည့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ ဖြစ်ကြသည်သာမက ဘုံရည်မှန်းချက် တူညီကြသည့် အာဆီယံ မိသားစု အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများလည်း ဖြစ်ကြပါသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၇၀)ကျော် ကာလအတွင်း မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံတို့သည် အိမ်နီးချင်းကောင်း ပီသမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေးမူကြီးများကို အခြေခံ၍ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေး ရှိခဲ့ကြပြီး မိမိတို့ ပြည်သူများ၏ အပြန်အလှန် အကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ကြဉ်းနိုင်ရေးအတွက် နယ်ပယ်စုံတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ရှိခဲ့ကြပါသည်။
အဆင့်မြင့် ခေါင်းဆောင်များ၏ အပြန်အလှန် ခရီးစဉ်များ မကြာခဏ သွားရောက်မှုနှင့် နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များအကြား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ရင်းနှီးမှု တည်ဆောက်ခြင်းများမှ တစ်ဆင့် နှစ်နိုင်ငံအကြား ရှိရင်းစွဲ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေးသည် မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးအဆင့်သို့ လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်း တိုးတက်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ မိမိတို့ဒေသ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဒေသခွဲဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ် မူဘောင် အများအပြား အောက်တွင် မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံတို့သည် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။ လာမည့်နှစ်များတွင် မိမိတို့ နှစ်နိုင်ငံအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် ဆက်လက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိမ့်မည်ဟု မိမိအနေဖြင့် အခိုင်အမာ ယုံကြည်ပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ မင်္ဂလာရှိသော အခါသမယတွင် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ပြည်သူများအားလုံး ဆက်လက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကြပါစေကြောင်း မိမိအနေဖြင့် ဆုမွန်ကောင်းများ ပို့သအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့အကြား သံတမန်ဆက်သွယ်မှု ထူထောင်သည့် နှစ်(၇၀)ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အခါသမယတွင် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရာယုဒ်ချန်အိုချာထံမှ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့ ပေးပို့သည့် သဝဏ်လွှာ
( ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့)
ယခုနှစ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတို့အကြား သံတမန်ဆက်သွယ်မှု ထူထောင်သည့် နှစ် (၇၀) ပြည့်မြောက်သော အခါသမယ ဖြစ်သည့်အလျောက် မိမိအနေဖြင့် အဆွေတော်နှင့် အဆွေတော်မှ တစ်ဆင့် မြန်မာပြည်သူများထံ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါကြောင်းနှင့် ဆုတောင်းမေတ္တာများ ပို့သအပ်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း (၇၀) ကျော်ကာလအတွင်း ထိုင်းနှင့် မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအကြား အိမ်နီးချင်းကောင်း ပီသမှု၊ အပြန်အလှန် နားလည်မှုနှင့် တူညီသည့် ဘုံရည်မှန်းချက်များအပြင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းကပင် နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူများအကြား ရှိခဲ့သည့် ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုတို့ဖြင့် ထူးခြားကောင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ အချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေခံကောင်းများဖြင့် အမျိုးမျိုးသော စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံအကြား နက်ရှိုင်းသည့် ကဏ္ဍစုံ ပေါင်းစည်းဆက်နွယ်မှုဖြင့် ပိုမိုခိုင်မာမှုရှိသော မိတ်ဖက်နိုင်ငံများအဖြစ် နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားသာမက ဒေသတွင်းအကျိုးစီးပွားကိုပါ ဖော်ဆောင်နိုင်မည့် မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက် ဆက်ဆံရေးသို့ အတူတကွ လျှောက်လှမ်းလျက် ရှိနေကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ အောင်မြင်မှု မှတ်တိုင်ကို စိုက်ထူနိုင်ရန်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရ အနေဖြင့် ထိုင်း-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် သာယာဝပြောရေးသာမက အာဆီယံနှင့် ဒေသတွင်း အကျိုးစီးပွားအတွက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် အနီးကပ် လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားရန် ရှိကြောင်းကို ထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါသည်။ ထိုမျှမက ထိုင်းနိုင်ငံအပေါ် အပြုသဘောဆောင်သည့် ဆက်ဆံရေးနှင့် အခိုင်မာဆုံး ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတို့ကို ယုံကြည်သက်ဝင်စွာ မြှင့်တင်ခဲ့ကြသည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် ပြည်သူများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။